भुलेर पनि नसोध्नुस् आफ्नी प्रेमिकालाई यी कुाराहरु, नत्र ब्रेकअप होला है – Fewa Times
प्रकाशित मिति: January 18, 2020 3:56 pm
काठमाडौं – जिन्दगी चलाउन केटा र केटी हुन् आवश्यक छ । यी दुईमा एक जना पनि नभए जिन्दगी चलाउन धेरै गाह्रो हुन्छ । धेरै केटाकेटीले विवाह अघि प्रेम गरेका हुन्छन् । केटाका प्रेमिका हुन्छन् भने केटिका प्रेमि हुन्छन् । कुनै पनि केटाले प्रेमिकालाई खुशी बनाउन अनेक गर्नु पर्ने हुन्छ ।
केटीहरूको दिमागमा के चलिरहेको छ, त्यो कसैलाई थाहा हुदैन । आफ्नो प्रेमिकालाई दुखी नबनाउन केटाले केहि प्रश्न गर्नुहुदैन । यदी यी केही प्रश्न गरेमा प्रेमिका रिसाउने गर्छिन् । कुनै पनि केटिहरुले प्रेमीले आफूले लुकाएको कुरा नसोधोस् भन्ने सोचाई राखेका हुन्छ ।
कुनै पनि केटाले आफ्नो प्रेमीकालाई म तिम्रो पहिलो प्रेम हुँ ? भनेर सोध्नुहुदैन । केटीहरुलाई आफ्नो केटा साथीभन्दा बाहेक पनि अरु नै कोही मन परिरहेको हुन्छ । त्यसैले केटीहरुले प्रेमीले यस्तो प्रश्न नगरोस भन्ने चाहाना गर्छन् । त्यस्तै मेरी साथी वा बहिनी कति सुन्दर छिन् है ? भनेर पनि सोध्नुहुदैन ।
किनकी केटिहरुलाई अरुको सुन्दरताको तारिफले आफूलाई कमजोर सम्झिएको अनुभूति हुन्छ । अब अन्य कुनै केटालाई मन त पराउँदैनौं नि रु भनेर पनि प्रेमिकालाई सोध्नुहुदैन । त्यस्तै प्रेमिकालाई आमासँग किनमेलमा जाने हो ? भनेर पनि सोध्नुहुदैन । किनकी केटीहरू प्रेमीको आमासँग किनमेल गर्न जान डराउँछन् । प्रेमिकालाई तिम्रा अभिभावकले मलाई मनपराउँछन् कि पराउँदैनन् ? भनेर पनि सोध्नुहुदैन।
जिन्दगी चलाउन केटा र केटी हुन् आवश्यक छ । यी दुईमा एक जना पनि नभए जिन्दगी चलाउन धेरै गाह्रो हुन्छ । धेरै केटाकेटीले विवाह अघि प्रेम गरेका हुन्छन् । केटाका प्रेमिका हुन्छन् भने केटिका प्रेमि हुन्छन् । कुनै पनि केटाले प्रेमिकालाई खुशी बनाउन अनेक गर्नु पर्ने हुन्छ।
किनकी केटिहरुलाई अरुको सुन्दरताको तारिफले आफूलाई कमजोर सम्झिएको अनुभूति हुन्छ । अब अन्य कुनै केटालाई मन त पराउँदैनौं नि ? भनेर पनि प्रेमिकालाई सोध्नुहुदैन । त्यस्तै प्रेमिकालाई आमासँग किनमेलमा जाने हो ? भनेर पनि सोध्नुहुदैन । किनकी केटीहरू प्रेमीको आमासँग किनमेल गर्न जान डराउँछन् । प्रेमिकालाई तिम्रा अभिभावकले मलाई मनपराउँछन् कि पराउँदैनन् ? भनेर पनि सोध्नुहुदैन।